Arch Linux iri nyore kuisa kubva pakuburitswa kweazvino ISO | Linux Vakapindwa muropa
Munyika yekomputa pane kunyange memes nezve izvi: mushandisi we Arch Linux Ndiye mumwe munhu anoziva zvaari kuita. Chimwe chezvikonzero zvekuvapo kwemamwe mapurojekiti senge Antergos kana Manjaro ndeyekuti kushandisa Arch kuri nyore, uye chero munhu akaedza iyo yechipiri, senge yangu nyaya, anozvinzwisisa zvakanaka. Kuisa Arch Linux hakusi nyore, uye zvinoita sekunge Aaron Griffin, Allan McRae naAnatol Pomozov vanozivawo izvozvo, saka vafunga kuzvigadzirisa.
Kusvika ikozvino, kana isu tichida kuisa ino inoshanda system taifanira kutora mamwe matanho ekuwedzera uye ari nyore. Uye kwete, hazvisi izvo izvozvi zvakafanana nekuzviisa neUbiquity kana Calamares, kwete. Ndizvo here ivo vapinza sarudzo inoita kuti zvinhu zvive nyore, asi haina kuvhura inosimudza ine mushandisi interface. Ukangotanga izvi «nyore mugadziri», inotibvunza isu mutauro, uye woenderera nerumwe ruzivo senge yekuisa diski, network, desktop uye graphic driver. Kana tichiida, tinogona kudoma mamwe mapakeji ekuisa.
archinstall, iri nyore Arch Linux simaki
Kutanga simaki iwe unofanirwa kutaipa "archinstall". Ndakazviedza uye zvine musoro, hazvisi nyore senge muManjaro, semuenzaniso, asi hapana chikonzero chekuve nyanzvi yepamusoro yekumisikidza iyo system kushanda. Zvatichagadzirisa zvichave zvinotevera:
Disk iko kwekuisa iyo inoshanda sisitimu.
Kiyi kana tichida kunyorera disk.
Kugadzirwa kwemushandisi-mukuru, watinogona kusiya.
Mushandisi, watinogona kusiya kana isu takagadzira super-mushandisi.
Kana isu takawedzera mushandisi isiri yepamusoro, tinoratidza kana tichida kuzviita izvo.
Desktop, kusarudza pakati peanotyisa, desktop, gnome, kde, kde-wayland kana xorg.
Ndeapi magiraidhi kadhi atinoshandisa.
Kana isu tichida kushandisa yepamutemo kana yakavhurika sosi mutyairi.
Kana isu tichida kuisa package, seGIMP kana VLC.
Mhando yekumisikidza, kusarudza pakati pekutora kubva kuIO kana ens3.
Kana imwe nguva yenguva yapinda, inotikumbira kuti tinyore Enter uye kumisikidza kunotanga. Mune zvakawanda zvingasarudzwa, paunofanira kusarudza, tinogona kuisa iyo nhamba kana zvinyorwa izvo zvinoonekwa. Sezvatatsanangura, haina kuita seyakaisa iyo yakawanda inogoverwa inosanganisira, asi inoshandura zvinhu zvakanyanya.
Arch Linux inoshanda mushe mushe uye zvino zvave nyore kuisa, uchafara here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Arch Linux iri nyore kuisa kubva pakuburitsa yako yazvino ISO